Itende laseNdiya labantwana.
I-Teepee yezingane ingumcabango omuhle kakhulu ngokuhlobisa kwekona lokudlala lezingane zethu noma isipho sosuku lokuzalwa. Amatende anokwakheka okuhle, athungwe kusuka kukotini obukhulu noma ngendwangu yelineni futhi aqeda ngokuwugoba ukotini. Sinemiklamo eminingi namamodeli - sizokwakhela ama-teepee umfana nentombazane.
Izinti zikaphayini ezakha uhlaka ziyacaba futhi zibushelelezi, futhi zifihlwe emhubheni othungelwe phansi. I-Teepee yezingane, etholakala esitolo sethu se-inthanethi, yadalwa ngendlela yokuthi kungenzeka ukuthi unamathisele isakhiwo sonke usebenzisa umucu obukhulu onobuhlalu. Amatende anezindonga ze-5 nesisekelo se-pentagonal, ezenza zizinze futhi zikhulu kune-teepee enesikwele. Wonke amamodeli anewindi ngakwesobunxele.
Sakha amatende ePoland, ikakhulukazi emikhiqizweni evela ekhaya. Sinakekela yonke imininingwane nekhwalithi ephezulu. Isitolo se-tipi online sifaka imiyalo nesembozo se-teepee yezingane. Ngaphezu kwalokho, abantu abathenga itende lezingane, isitolo esiku-inthanethi sizosiza ekukhetheni iketeteeepe enethezekile, etholakala kumiklamo ehlukahlukene. Sikumema ukuba ujabule emhlabeni wethu.
Itende likaTeepee elinamafriji "wefrijini kafulawa"
Itende likaTeepee elinama-frill "shabby chic"
Itende likaTeepee elinamafrimu "abantu"